Chii chandingaite muLinux chandisingakwanise kuita muWindows? | Linux Vakapindwa muropa
Chii chandingaite muLinux chandisingakwanise kuita muWindows?
Mushandisi paReddit akabvunza nezve zvakanakira Ubuntu pamusoro peWindows, ndokuti, chii chingaitwe pane Linux system iyo yaisagona kuitwa pane mamwe masisitimu. Mhinduro dzeve foreros dzaive nesimba, vachipa mazita kubva kumatafura kuenda kuchipatara
Chokwadi uyu mubvunzo iwe wakambozvibvunza iwe imwe nguva muhupenyu hwako, vanhu vazhinji vanoshandisa Windows uye vanofarira kuziva nezve Linux nyika vakazvibvunza mubvunzo uyu. Izvo zvisati zvamboitika ndezvekuti mumwe munhu akabvunza uyu mubvunzo muforamu yakaita Reddit, mune mushandisi uyo eIni ndanga ndichifunga kuchinjira kuUbuntu akazviita, achiti chii chingaitwe neLinux izvo Windows kana MacOSX zvaisagona
Uye zvechokwadi, mhinduro kubva kuLinux neUbuntu vanoda havana kumirira. Vakaedza kugonesa uyu mushandisi Ubuntu ihwo hwaive nani pane Windows uye OSX ine yakawanda nharo, dzimwe dzine hwaro hwakawanda kupfuura dzimwe asi pasina mubvunzo dzinonakidza.
Pakati pemashoko akanyanya kuvhota, paive nezvimwe zvinonakidza senge kugadzirisa tsika dzeLinux nematafura(Cinnamon, Unity, Mate, Plasma ...) zvine chekuita neiyo chete Windows desktop inoshandura ruvara, kumashure uye zvishoma zvimwe. Vamwe vakasarudza kushandiswa kweLinux muzvinhu zvakaita setemu, kukanganisa mishumo, mahara mashandisirwo ...
Vamwe vanosarudza sekai matambudziko ewindows, ichiti Linux haina bhuruu skrini yekufa uye haifanirwe kutanga zvekare kuisa zvigadziriso.
Apple's system, OSX, yakashoropodzwa sekuve kudhura zvakanyanya, kuti maturusi eUnix anga asisiri echinyakare uye kuti ivo havazive mabatiro emapakeji zvakanaka.
Kana iri maonero andinawo nezve zvinogona kuitwa muLinux, ndinofunga kuti izvo zvinotaurwa zvakasiyana pane zvimwe zvinhu zvisina kutaurwa zvakanyanya.
Hatibhadhare: Paunenge uri muWindows unofanirwa kubhadhara marezinesi anodhura kana kuita zvekupamba, muLinux tine software yemahara uye yemahara.
Tinogona kugadzira yedu yega yekushandisa system: Chinhu chakanaka nezve linux uye yemahara software ndeyekuti isu tine kodhi yekodhi inowanikwa kuitira kuti vane hunyanzvi vagone kuishandura vozvigadzirira yavo Linux system. Windows, kune rumwe rutivi, inoshanda zvakanyanya mune izvi.
Tine chivimbo chakanyanya: Kubva Windows 10 yakabuda naCortana achikumbira nzvimbo neWindows kukumbira yedu dataIzvo zvinodikanwa kuti ushandise Linux kana iwe uchida kunakirwa nekuvanzika.Ukuwedzera, isu hatifanire kukanganwa muWindows isu tichaoneswa kune enguva dzose makomputa mavhairasi.
Rarama CD: Mune mazhinji maLinux masisitimu tinogona kuyedza iyo system tisingayiise, kuburikidza neRarama CD. Kune mamwe maofficial emhando paMicrosoft masystem, asi haashande zvakanaka (ndakaedza Windows XP Live uye yakapa bhuruu screen yerufu painobhucha).
Nhamba yekugovera: Windows inongova nekuparadzirwa kumwe chete mushanduro dzayo dzakasiyana. Linux ine zviuru zvekuparadzira pamwe neayo desktop desktop akasiyana. Ndiro simba reLinux iro kunyangwe Microsoft iine yayo wega Linux kugovera.
Zvimwe: Kubva kukurumidza kuuraya kusvika mukana wekupakisa yakagadziridzwa masisitimu anoda mashoma anodikanwa asi anotsigirwa, kune zvimwe zvakanaka zveLinux pamusoro peWindows asi kana ndikaisa zvese hazvizopera kusvika mangwana.
Ini ndinofunga kuti izvo chete zvakanakira izvo Windows zvainazvo nhasi ndezvekuti zvine vazhinji vashandisi uye kuti zviri nani mumitambo, mukana wekutanga wakajairika mukunyaradzwa nekusaziva kwevanhu uye wechipiri ini ndinotarisira kuti zvinhu zvichave zvakaenzana kana Steam inobuda Mashini Kana iri OSX, ini handitomboitumidza zita, kubvira Ini handinzwe kuda kubhadhara 2000 maEuro yeHardware yandinogona kuwana mazana manomwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Chii chandingaite muLinux chandisingakwanise kuita muWindows?
Ichokwadi ndechekuti ne ubuntu (xububtu ini ndinoshandisa asi shamwari tb ndakaifarira zvakanyanya) ini ndaizoisa zvakare kuti haina hutachiona, haina vatambi vevashandisi ... uye kuti mitambo inoenda, zvirinani Ndinoona kuti vari nani
Ndiri musayendisiti wemakomputa uye ndinogara ndichigovera zveGNULinux kumberi mune zvese zvinhu pamberi win2 uye OSX.
Zvino izvo zvinondipa kudya2, nei? Isu tatoziva kuti sei, nei ichikundikana sepfuti yepfuti, asi vazhinji vacho vari kutya kuchinja, kunyangwe muhondo yangu pachezvangu yekusimudzira maSoftball emahara, zvishoma nezvishoma vamwe vari kuchinja.
iwe semusayendisiti wezvemakomputa une zvandiri semufiri, regai tione ... mune linux hazvireve kuti ndeye mahara, chete izvo zvakanzi nharaunda yakanyanya "kuvhura" sekutaura. Dambudziko harisi kubhadhara asi iko kuita uye izvozvi windows inokunda nekure kunyangwe kukundikana kwayo uko kunongokunda mumaseva ekugadzirisa, ndiko kukundikana kwemawindows nekuti panguva yechokwadi yakarongedzwa windows uye kwete yeLinux kana Linux. inotsigirwa nenyika zhinji dzinosanganisira Microsoft
Tarisa kuenzanisa kweumwe wangu pakati peUbuntu neWindows 10
Zvakare chinhu chakashata nezveLinux ndechekuti vanhu vanozvigumira pakushandisa Ubuntu uye vasingakwanise kuishandisa zvakakwana, chakanakira kusarudza kugovera kunoenderana neizvo zvauri kutsvaga sezvo paine migove yezvinhu zvese zvido uye Windows chete ine Windows Windows, kana iwe uchida kutsigirwa, inokumanikidza kuti utenge komputa zvishoma zvishoma (nekuti izvo zvezvinodiwa zvishoma ndezvekunyepa, nekuti ne1GB yegondohwe unovhura chirongwa uye chinopaza uye ne2 Gb yeRam yakakosha iyo yeinternet, yeIzwi uye zvimwe zvishoma), kune rimwe divi neLinux unogona kumutsa chero yekare laptop ine kugovera senge Lubuntu kana Puppy, iine inoshanda komputa uye nerutsigiro.
Pamusoro pezvo, Windows 10 yakanyanya kuwedzererwa, ndinayo pane imwe yemacomputer angu uye mutsauko chete wandakaona zvine chekuita neWindows 7 ndeyekuti inotanga nekukurumidza, ipapo zvishoma zvishoma zvinondiudza kuti Cortana neWindows Explorer vanoita isingashande (Zvakanaka, Cortana haambondishandi nekuti handina kumurega aone kwandinogara), mimwe mitambo yakamira kushanda uye madhiraivha anga ari njodzi kubvira rimwe zuva pandakaedza kupenya foni zvaisazondibvumira kuisa vatyairi ve preloader uye yakaisa zvayakakunda. Windows ine vashandisi vazhinji nekuda kwekuti vanhu havashanduke uye vanoenda kune akanyanya kugadzikana uye nekuti Microsoft inoisa marezenisi akafanogadzirwa mumakomputa anotengeswa, ipapo vanhu vanofunga kuti Windows mahara uye havazive kuti zvinokanganisa mutengo wavo komputa uye ndosaka shitty malaptop ane imwechete musimboti maprosesa akakosha anodarika mazana matatu euros, kana vakakupa laptop yakachena vokuudza kuti ubhadhare zana euros yeWindows kana kuisa maLinux emahara ini ndinokuudza zvaizoitika.
Pamaseva ini ndinobvumirana newe, kunyangwe Microsoft ine yayo yoga yekuparadzira
Izvo zvatova zvechokwadi haha, ini ndatorawo akawanda pelas achifomata Windows makomputa nekuti mushure memazuva maviri vanhu vanoazadza nemarara kana kubhurawuza kubiwa kuisa mapurogiramu nekupa inotevera / inotevera / inotevera.
Dai vanhu ava vakadzidza zvishoma kushandisa Linux vangadai vasina matambudziko akawanda sezvavainazvo, izvo pakati pekubiridzirwa nemalaptop emutengo wakaderera ane processor yakaipa kupfuura Pentium IV uye pelas dzinoshandiswa pakomputa sainzi handizive vanowana mari kubva.
Zviripachena nenhoroondo uye dhizaini, Linux iri pamusoro peWindows kunze kwenzira shoma. Asi nenzira imwecheteyo yekuti kuve neinzwi rakanaka hakuiti kuti munhu abudirire murwiyo, kuve mashandiro ari nani hakuite kuti ishandiswe zvakanyanya.
Heano makakatanwa mashoma:
A) Windows inodhura pane Linux. Kugadziriswa kwayo kuri nyore uye kunoda kupindira kushoma nevanyanzvi vehunyanzvi chero bedzi mushandisi aine mutoro zvishoma.
Semuenzaniso. Mushandisi akajairika anoisa VMWare kekutanga paWindows yake. Rudzi irworwo rwemushandisi harwuite muLinux uye rwunodhumhana neVMWare Zvishandiso izvo zvinogona kutyisa kuzviisa uye nerombo rakanaka kana vasingafanire kuumbiridza zviwanikwa.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti niche huru yeLinux maseva, makambani mazhinji ari kutamira kuWindows Server nekuti kugadziriswa kwayo uye mutengo paawa revatariri wakadzikira zvisinei nekuti bhuruu rebhuruu rinobuda sei.
B) Ehe, michina yeLinux inotengeswa, mishoma. Asi semuenzaniso pane iyo Linux musiyano weiyo Dell XPS 13 ine Ubuntu. Ruzhinji rwevashandisi runotiza kunyangwe dai vakaripihwa ne30% dhisikaundi. Vanotya Linux.
C) MuWindows pane kugovera kumwe chete nemisiyano. MuLinux mune mazana, uye iko kuputika kwemastros, desktops uye kumwe kunovhiringidza mushandisi uye kunoita kuti chirongwa chinodhura paanenge achiedza kuzviitira zvekutengesa (hongu, nenzira imwechete iyo mubiki ane kodzero yekurarama achigadzira chingwa, programmer ane ichigadzira software uye vese mapurogiramu vari vemarudzi akawanda)
D) Chaizvoizvo seWindows Mobile zvainonetsa nekuda kwekushomeka kwemaapplication, mahwindo mahombe akarongedzwa kune ese mamiriro ezvinhu uye mazhinji acho anozivikanwa nemasangano ehurumende, mabhangi, makambani, nezvimwe.
E) Windows yakaipisisa kupfuura Linux, asi yakavandudza zvakanyanya uye kana ikaenderera neiyi maitiro inogona kusvika Linux kunyanya kana ichigadzirisa dambudziko rekukanganiswa kwehuwandu hweva processor.
Kana iwe usingaone misiyano yakawanda yakanaka pakati peWindows 7 ne10 zvisinei neruzivo rwako rwemasystem, kana iwe usinga nyatsocherechedza, kana iwe ukashandisa Windows zvishoma kana makomendi ako zvine hukasha zvakanyanya, wakasununguka kutora divi, asi usina kushora kana kuzviisa pasi.
F) Microsoft kutsigira Windows uye hofisi yayo yese automation chikuva yakagadzira masevhisi akavimbika anowedzera kushandiswa nemakambani akadai seAzure, Share Point, data server mapurazi uye neWindows Server 2016 ichapa zviuru zveanonyatso-nano-maseva mune imwechete rack iyo makambani ekubata kumakore.
Ini ndinorarama zvine hunyanzvi ndichivandudza software (kwemakumi emakore) kumakambani makuru, kunyanya mune Windows nharaunda uye maLinux maseva (pano chete dhatabhesi uye mamwe madhimoni). Ini ndinofarira Fedora mushandisi uye ndichiri Linux yemuno programming mudzidzi. Linux chikomborero uye sosi yeruzivo uye kungoti kana ichizadzisa zvido zvainofanira kushandiswa.
Zvakanaka Azure ndeyeLinux haha, mune vamwe vese unenge wakarurama asi zvinhu zvakawanda zvaunotaura zvinokonzerwa nekusaziva kwemushandisi mushandisi mukomputa uye kwete Linux, kunyanya mune nyaya yematafura uye zvekugovera izvo chaizvo zvinobatsira, asi zvakafanira kune kutya kwevanhu nekusaziva kwave kusagadzikana sezvaunonyatsoratidza.
Zvese izvi imhosva yehurongwa hwedzidzo, nekuti munzvimbo dzinoverengeka dzekudzidzisa ivo vanodzidzisa Linux iyo yekuidzidza iwe kana iwe uri wega-unodzidziswa kana iwe unofanirwa kusaina kuinjiniya kana ASIR kutenderera uchiri kubva pazera diki ivo vanoisa Windows iwe uye anokudzidzisa iwe kushandisa Izwi, Excel… Zvakare mhedzisiro yekusaziva kwevamwe vadzidzisi vane hurongwa hwedzidzo iyo inobvumidza vadzidzisi vakadzidza chemistry kuti vadzidziswe kudzidzisa komputa sainzi kuchikoro chesekondari.
Ndinoyeuka pandakanyoreswa muASIR kuti vazhinji vevanhu vakapa sainzi yemakomputa muchikoro chesekondari, asi kusanganisa isu vedu takazvidzidzisa uye tichizvifarira chaizvo, vamwe vese havana kana zano uye havana kana ziva maitiro ekuomesa komputa yeWindows uyezve haugone kubvunza zvakawanda kubva kuvanhu ivavo.
Chero bedzi pakunenge kusisina imwe sainzi yemakomputa inodzidzisa muzvikoro, chero bedzi ivo vachiramba vachiisa makemikari pachinzvimbo chemakomputa masayendisiti kuti vadzidzise uye chero bedzi ivo vachiramba vasina kubata Linux, izvi zvinosuruvarisa zvicharamba zvakafanana ...
Pachikoro changu tiri kushandisa Linux, sezvo isu takabatana nechirongwa cheScholarium. Isu tinoshandisa musiyano weDebian wakagadzirwa neJunta de Extremadura inonzi LinEx. Uye ini, ndiri "musimboti" mushandisi weLinux neWindows, ndinofanira kubatsira vandinoshanda navo. Just paPC yangu ndiri kuenda kuisa LinEx mumakoreji 2010, sezvo yatinoshandisa isingawanikwe kurodha pasi :(
Ini ndinobvumirana newe, kunze kwekunge iwe uchiti "chinhu chakaipa nezve linux ndechekuti vanhu vanongoshandisa ubuntu uye vasingawane zvakakwana nezvayo." Iri harisi dambudziko reLinux, idambudziko revashandisi risingade kana risingafarire kuchinja kana kudzidza.
Ini ndakanamatira zvachose mundima iyi yemacomputer, ini ndoda kuita chaiyo online kosi yakavakirwa pachirongwa cheAFI uye handizive kana iyo linux kana guadalinex system ichandibatsira, maita basa.
Mukutaura haufanirwe kunge uine matambudziko. Kana iwe ukandipa chinongedzo cheiyi kosi ndinogona kuzvisimbisa
Mahwindo anokunda panhau yemitambo asi Linux iri kutanga kuenda munzira kwayo yekutenda kune steam uye isu tinofanirwa kuona shanduko, asi isu tinofanirwa kutarisa zvakanyanya kuyedza pareoffice.
Uchaona neSteam Machines, pakati pekuti mitambo yemitambo haisi izvo zvavaimbove uye kuti katarogu yemitambo yeLinux paStam iri kuwedzera, huwandu hwevashandisi huri kukura zvakanyanya
… «Unofanirwa kunzwisisa kuti vanhu vazhinji vachiri chikamu chehurongwa. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti vanhu vazhinji havana kugadzirira kudamburwa. "Uye vazhinji vacho havana simba, vanovimba nesisitimu, zvekuti vaizorwa kuti vazvidzivirire."
(Morpheus kusvika Neo)
Mukupedzisira, mubvunzo wakaramba usina kupindurwa, chii chandingaite muLinux zvandisingakwanise kuita muWindows?
semuenzaniso "MuLinux ndinogona kuona mafirimu mu3D uye kwete muWindows" (nyaya yekunyepedzera).
Orlando Sierra akadaro
... dzidza nezve mutauro wemuchina, zvirongwa, mirairo, nezvimwe ... uye kugutsikana kwekuwana zvaunoda (zvinowanzo tungamirwa nevashandisi ivo pachavo) uye kwete kungoita musungo wemunwe kubaya kiyi ... (zvirinani Ndiri kunzwa saizvozvo .. ndanga ndiri mushandisi weWindows kweanopfuura makore gumi; ndanga ndichishandisa Linux mint kweinenge mwedzi mumwe uye ndadzidza chimwe chinhu ...)
Pindura Orlando Orlando
Mubvunzo hauna musoro. Ose maWindows neLinux ari kushanda masystem, kungori madhiraivha ekumhanyisa kunyorera pamushini. Chero kunyorera kwakarongedzwa muLinux kunogona kuiswa muWindows uye zvinopesana. Iko hakuna kunyorera izvo mumwe anogona kuve nazvo uye mumwe asina. Kana isu tichireva kune iyo nhamba yezvishandiso yakaburitswa, Windows inokunda. Chinhu chakanaka nezveLinux ndechekuti yakanangana nekutsvaga vanoshandisa. Chinhu chakanaka nezve Windows ndechekuti zviri nyore kushandisa uye ine yakawanda yemusika software iri muhomwe yako.
Mhoroi, ndiri kushamiswa neruzivo rwamunarwo nezveLinux asi ndinofunga munoperevedza nema windows kuti nenzira kana iine maitiro kana muchida tichaonana uye ini ndichatsanangura kuti mawindows akakunda sei vashandisi vawo zvisinei nekuti vakabhadharwa sei rakabiwa chokwadi ini ndinofunga linux yakanaka uye vhezheni yayo yenharembozha ndiyo inozivikanwa uye yepasirese mutungamiri anoshanda system yemafoni mafoni: Android
Pano google inohwina zvayisina kuita mulinux, ndinozviwana mu = Android uye izvo hazvirambiki nekuda kwekugona, kuita uye nyaradzo yemushandisi nditumire email KioKusanagiD@gmail.com isu tichazosangana nekunakidzwa kuona peji iro chokwadi chinonakidza
Wakanakisa mubvunzo, nei Linux, chii chakasiyana ?; Ini ndinofunga kuti mubvunzo wakanangana nemushandisi akajairika asina kugona kugadzirisa kodhi, ndiani asingafarire kuisa iyo inoshanda sisitimu kana kuti inoitwa sei kana zvisiri izvo zvinongoshanda chete.Kana iwe uchida kuenzanisa ne windows une kusvika padanho remahwindo uine fungidziro yekuti "mushandisi akanyanyisa kupfuura iwe kufunga" (hapana mhosva). Kubva pane ino maonero ini ndinosimbisa seyisingaenzanisirwe mukana wekuti kune Mahara OS:, kusimba kwesisitimu, rutsigiro, nezvimwe ... zvinhu zvine hukama nesisitimu uye chengetedzo. Asi ini ndinodzokorora mubvunzo, nei ndichifanira kushandisa linux kana ndagara ndichishandisa windows uye ndisina ruzivo rwechirongwa kana chero chinhu? "Ndiri kuda kudya hamburger, ndisingazive kuti ndiani akauraya mombe"
Kwaziso uye yakanaka saiti!
Ndine muchina wekare kwazvo (Pentium 4 uye chete 512 MB ye RAM) uye nekutenda kuLinux ndinogona kuishandisa pasina matambudziko, ndinoshandisa Mageia uye inoshanda pasina matambudziko, pakomputa iyi ndinogona kupisa madisc (BD, DVD, MP3 , CD Audio), shanda econometric mamodheru muR, gadzira uye gadzirisa zvinyorwa (PDF, docx, xlsx) uye purinda (Samsung ML 2160), ndinogona zvakare kuona VLC mavhidhiyo mune akawanda mafomati (mp4, avi, webm) uye teerera kumumhanzi (CD, mp3, mp4a). Iwo mapurogiramu akanakisa uye akatsiga (K3B, LibreOffice, Chromium, Firefox, VLC), ese maJava application anomhanya pawebhu, kufamba kunokurumidza uye kwakachengeteka, ndinogona kushanda nekubatana nevandinoshanda navo vanoshandisa zvese OS neWindows, ndinogona zvakare decompress rar zip tar mafaira uye mamwe mapakeji ... Zvese izvi zvaisagona kuitwa mune chero vhezheni yeWindows (pamwe muXP mamwe emabasa ataurwa, asingasvike makumi maviri muzana), kana ini ndaizofanira kurodha pasi software maererano nehutachiona hunogona kuitika. kurodha pasi uko nematambudziko mazhinji kunogona kuiswa pane yangu pc. Iine Linux iyo PROGRAMMED OBSOLECENCE ye software uye Hardware iri MINIMUM. HAPANA kumvumo, HAPANA kune marezinesi ...
Uye izvo ndizvo izvo… zvakanakira.? Chii chinonzi kuchengetedzeka kune hukama, asi zvakadii nezve kugadzirwa? Izvo hazvina basa kubhadhara kubhadhara kana vachiita kuti hupenyu hwako huve nyore, iyo windows nharaunda kunyanya kubva windows 7 yakasimba, yakavimbika uye yakagadzikana kwazvo, ini parizvino ndinoshandisa windows 10 uye iyo chokwadi, ndine maapplication andinoda pabasa rega rega mune desktop modhi ini handidi kushandisa koni uye nemuchina usiri kudhura zvakanyanya ndine kugadzikana uye zero kurovera, uye nenzira yandisingashandise antivirus, chete iyo firewall, iyo antivirus iyo system inounza uye yakajairika pfungwa kana uchishandisa komputa, ini handizive kuti nei vane hunyanzvi mukurwa nesystem iyo nhasi inodarika linux zvakanyanya, hazvina basa kuve ne desktop inobata moto kana pa nguva yekuita chero chinhu zvichienderana nekuti iwe une graphical interface kana zvinoita sekunge unoshandisa windows 98, ndinoda linux asi haina nani kupfuura windows, kunyanya mukugadzira, kunze kwekunge iwe uchizvipira iwe chete mukusimudzira uye kwete, ini handizive ...
Kana iwe uchitenda zvaunotaura, ndinozviremekedza asi ndisingagovane, windows 1 kana zvirinani pane kugoverwa kweGNULinux? Zvakanaka, kwauri, ini ndinosarudzawo kuti munhu wese ashandise Windows, nekuti kana zvisina kudaro ndaizosara ndisina 59% yebasa
Ndinoziva ndabuda pachiuno. Mwedzi mina yapfuura kubva pamaonero ekupedzisira asi ini handidi kurega kucherechedza kuti kuenzanisa windows uye linux hazvidi kuti utaure nezve software kana kuziva mitauro!.
Iwe unongofanirwa kurangarira chikonzero nei iyo $ irata Bill yakagadzira windows, kuitira kuti chero benzi rishandise komputa uye mashandiro ayo, nenzira iyoyo kutengesa macomputer kune chero munhu ane zvigunwe zvishanu uye imwe neuron yaizoita mari yakawanda !! , panzvimbo pekuenderera tichitengesa makomputa chete kune vepamusoro vevanhu vanopenga kuti tisati tashandisa pc yechinhu chinobatsira, taifanira kumbodzidza zvekutanga.
Ndanga ndiri windows windows kwemakore mazhinji, sezvo semuchina wemagetsi, ndakasarudza chimwe chinhu chiri nyore kushandisa pane zvandinoda uye kwete kutambisa nguva ndichidzidza chimwe chinhu chisinei nebasa rangu!
Kunyangwe isiri iyo panacea uye ine bhuruu skrini nezvose, windows inosangana nepfungwa, kushandisa chimwe chinhu chausingafanire kuziva kuti chinoshanda sei, ndinogona kutyaira mota yangu mazuva ese ndisingazive kuti ine masirinda mangani! kune izvo kune mamakanika! nyanzvi! etc.
Izvo zvakati, ini ndinowedzera kuti neimwe basa linux iri kuve nyore kushandisa pasina kurasikirwa neuzivi hwayo!
Ini ndichangotanga kushandisa Linux Mint Mate uye ndinofara nekuita kwayo.
Nemafungiro iwayo munguva pfupi iri kutevera mota yako ichakandwa mumugwagwa uye uchafanirwa kuramba uchibhadhara vamwe kuti "vaigadzirise" (dzorerazve, nekuti haina kugadziriswa).
Dzimwe nguva ndinomira kuti ndiverenge mapenzi aya achitaura nezveLinux. Ivo ndehama dzevanhu vanotenda kuti nekuti vanoshandisa Linux ivo vatove padanho repamusoro. "Vanenge maHacker", uye zvese zvavanoita kupedza hupenyu hwavo paGoogle kutsvaga mhinduro kumatambudziko anomuka zuva nezuva; Uye pane izvo zvavanowana, hafu inovashandira, nekuti kune huwandu hwakawanda hweLinuxboludos vanotaura nekuti mweya wakasununguka, uye panzvimbo pekukubatsira, vanokukanganisa.
Nekuti Linux chakavanzika, mune mimwe michina inoshanda neimwe nzira uye mune imwe mune imwe, madhiraivha anenge asingamboshandi, zvese zvaunoisa iwe unofanirwa "tweak" kuisa kutsamira, hongu, pese paunovawana, uye ivo vachataura. me: siiii hongu iripo, asi uku uchipedza zviuru zvemaawa pagore kugadzirisa chimwe chisingashande
Imwe Linuxboludo ichandiudza: "asi maSeva eAmazon ndiLinux !!!!" Hongu, uye mota yasekuru vangu yakadhonzerwa nebhiza. Sevha mota, haisi iyo Ferrari, uye kana ndikakwanisa kuzvichengetera marezinesi, ndinofara. Asi kunyangwe zvakadaro, kana iwe uchida chimwe chinhu chakanaka muLinux, uchafanirwa kuribhadharira… .. sezvakangoita mumahwindo
Mufananidzo? kana padhuze
Hazvigoneke kuenzanisa Photoshop neGimp, kana OpenShot ne Sony Vegas, (Uye pano mumwe munhu achataura Cinelerra kwandiri, asi baba vako vanoita kuti ishande)
Saka chiri kupi chinhu?
Kana iwe uri muKaturike anoshingaira anoda kupfeka hembe yebvudzi neminzwa kuti uzvitambudze iwe zuva rose uye uve anoenderana nekutenda kwako, ini handikupikise, kana kukutsoropodza, kana kukupa mhosva. Wese munhu anoita zvavanoda, kana iwe uchida kushandisa linux uye kushandisa hupenyu hwako mugoogle kuti ugone kutaura kuti iwe uri nyanzvi yemakomputa, zvakanaka
Asi usanyengedza varombo vasingazivi
Usavaudze nyaya, nekuti varombo varombo vanozvitenda.
Vanokanganisa neLinux, (sezvandakaita) uye pakutanga vanofunga kuti imhaka yekuti havazive, kuti hapana chinoshanda, saka nekuti ivo vanofunga kuti havasati vaziva zvakakwana, uye pakupedzisira unoziva zvaunoziva, iwe ndinofanira kuva zuva rose ndiri pambongoro,…. kana Penguin
Dzimwe nguva ndinodzokazve, ini ndinoisa zana remazana distro kuti ndione, rekupedzisira raive Elementary Freya kana chero zvarinodaidzwa.
Shit shit, pakupedzisira ndaifanira kuidzima kaviri ndisati ndaibvarura
Kana iwe uchida kuve neRarama kuita fomati disks kana kuita kuti uwanezve, Puppy, distro shit iyo yezvaunogona kuita neLinux, une zvakawanda
William vasquez akadaro
Pano vanoedza kutaura nezve windows matambudziko asi linux haimbokunde matambudziko eanovice, zvinozivikanwa kuti vagadziri havasi kuburitsa madhiraivha ezvimwe zvigadzirwa zvemagetsi zvakaita semavhidhiyo makadhi uye maprinta, ayo anotadzisa mashandiro, zvakare linux haitumire tsamba mitambo yemagetsi yakasiyana yakafanana haina maDVD mabasa kunyangwe mamwe mawedzera-ons anoshandisa OpenGL, ndakamboshandisa windows nguva dzese pamwe ne xubunto fendora debian mandriva mandrake kusvika parizvino yenyika yangu canaima, asi sekuona kwaunoita haina kuona lso driver saka akareruka akafanana nevhidhiyo, mbeva, keyboard inoshanduka kuita nyonganiso. zvakare kana kukanganisa kukaitika, hazvisi nyore kuzvigadzirisa, kunyangwe paine vazhinji programmers vanobatsira kugadzirisa.
mumwe anogona kuita zvakafanana pane zvese linux uye windows. Iwe unongoda kujairana nharaunda, ita zvaunoita muLinux nemakodhi ako pachako uye zvirongwa. Hapana dambudziko uye nyika ndeyako zvakafanana. kubudirira kune vese.
Pindura kuna William Vasquez
Maitiro eLinux nehunto akafanana mac uye kutiza kwese kwese hunyanzvi hweudzvanyiriri hwehofori Microsoft Windows
Wepamusoro Vatatu Vhura Sosi Python IDEs